Senator Ayuub Ismaaciil oo USA kula kulmay Jaaliyadda Soomaaliyeed ee Awdal (Sawirro) - Ceelhuur Online
Home > Wararka Maanta > Senator Ayuub Ismaaciil oo USA kula kulmay Jaaliyadda Soomaaliyeed ee Awdal (Sawirro)
July 19, 2018 admin249
Jaaliyadda Soomaaliyeed ee ka soo jeeda Gobolka Awdal, kuna nool Magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ayaa maanta xaflad soo dhoweyn ah waxa ay u sameeyeen Senator Ayuub Ismaaciil Yuusuf oo booqasho shaqo ku jooga dalka Mareykanka.
Xafladda oo lagu qabtay “Days Hotel” kana qeybgaleen dad indheergarad ah oo ka kala tirsan qeybaha kala gedisan ee bulshada, ayaa Senator Ayuub waxa uu ka hadlay dhibaatooyinka la soo gudboonaaday gobolka Awdal iyo taariikhda Magaalooyinka Zeylac, Borama iyo kuwa kale oo ku teedsan xeebta Badda Cas, isagoo xusuusiyay in daadadkii ku rogmaday dhowaantan deegaanno ka tirsan dhulkaasi ay horseedeen burbur lixaad leh oo sii murjiyay xaaladdii horumar la’aaneed ee hore u jirtay.
Senator Ayuub ayaa ku booriyay qurbajoogta Awdal inay u istaagaan horumarinta, maalgeshiga iyo dib u dhisidda gobolka, isagoo farta ku goday laga maarmaanshaha in ilaha ganacsiga gobolkaasi dib loo soo nooleeyo, taasi oo ay ugu horreyso dekadda iyo garoonka, iyadoo gobolkaasi uu ahaa marin ganacsi oo wadamada Soomaaliya, Itoobiya, Yemen iyo Hindiya ay wax isku weydaaran jireen.
Senator Ayuub Ismaaciil Yuusuf ayaa sidoo kale ka sheekeeyay qorshayaasha dowladda ee taabagelinta Nabad iyo Nolol, taasi oo uu xusay inay xoojinayso hindisaha wadahadal ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ay kula jirto Somaliland oo dib u bilaaban doono waqti dhow.
Dugsiga tababarka Ciidanka ee TurkSom oo lagu qabtay Wacyigalin (Sawirro)